क्योटोको ज्याको र गीशा जिल्ला | Experience Japan
› ब्लग Nepali › क्योटोको ज्याको र गीशा जिल्ला
क्योटोको ज्याको र गीशा जिल्ला
यो एक भन्दा बढी जापानको राजधानी हुन प्रयोग र आधा शताब्दीपछि पहिले रूपमा क्योटो, सौन्दर्य र अनुष्ठान को यस्तो समृद्ध इतिहास छ। यो geiko वा गीशा पेशा उत्पत्ति कहाँ शहर छ। मध्य-17 औं सताब्दी मा, कुलीन चिया घरहरू मात्र यस क्षेत्रमा फेला चिया को एक विशेष प्रकार सेवा गर्न जवान महिला प्रशिक्षित। यी महिलाहरु चाँडै यस्तो अदालत नाच्छन् वा शामीसेन जस्तै परम्परागत साधन प्ले अन्य परम्परागत कला संग अतिथि रम्न थाले।
Geiko महिलाहरु अझै पनि आज क्योटो मा पाउन सकिन्छ। तिनीहरूले वर्ष सयौं लागि गरेका रूपमा व्यवसायीक गर्न नै उच्च वर्ग प्रदर्शन दिन जारी। ऐतिहासिक परम्परा संग राखन, यी geikos बाँच्न र शहर गरेको मनोरञ्जन जिल्ला काम। त्यहाँ अझै पनि मूल होस्टिङ geikos लागि प्रख्यात छ कि कर्तव्य जारी धेरै Geiko चिया घरहरू छन्।
क्योटो मा मुख्य geiko मनोरञ्जन जिल्ला Gion रूपमा चिनिन्छ। Gion Kobu र Gion Higashi: यो दुई समुदाय विभाजित गरिएको छ। दुवै प्राकृतिक इतिहास संरक्षण को एक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यो प्रयासमा क्योटो को इडो अवधि मा राजधानी थियो जब उनि गरिएको छ नै रूपमा क्षेत्रमा घरहरू र भवन राखन म राख्नु भएको छ भन्ने हो।
त्यहाँ काम गर्ने geikos उपस्थिति जोड Gion तीन मुख्य आकर्षण हो। पाठ्यक्रम पहिलो बन्न सधैंभरि यी महिला मनोरंजन लिङ्क गर्नुभएको teahouses छ। आगंतुकों र पर्यटकहरु आफ्नो क्योटो होटल मा कंसीयज मार्फत आरक्षण संगठित गर्न हुनत धेरै, धेरै विशेष हुनुहुन्छ। तपाईं एक परम्परागत क्योटो Inn घर Hiiragiya वा Tawaraya जस्तै एक बसाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने, तिनीहरू जहाँ geikos तपाईं र तपाईंको परिवार वा साथीहरूको खानाको पाहुना विशेष प्याकेजहरू छ।
अर्को स्थान Gion जिल्ला मा परम्परागत थिएटर छ। केही मात्र जापानी मा प्रदर्शन भए तापनि केही geikos र maikos द्वारा प्रदर्शन कला मा बेहतर विवरण वर्णन कि अंग्रेजी पुस्तिका छैनन्। सबैभन्दा पर्यटकहरुका लागि लोकप्रिय Gion कुना छ। को geikos र maikos त्यहाँ यस्तो परम्परागत साधन, प्ले वा एक नाजुक फूल व्यवस्था प्ले रूपमा सांस्कृतिक गतिविधि देखाउन हुनेछ। प्रदर्शन को अन्त मा, maiko को एक समूह एक समय-सम्मान नृत्य प्रदर्शन गर्नेछन्। तपाईं पूर्णतया यी टुक्रा कदर गर्न सक्छन् इयरफोन गाइड उपलब्ध छन्।
तपाईं प्रसिद्ध geikos देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ क्योटो मा अन्तिम सेटिङ वार्षिक चाडहरूमा समयमा छ। Geikos र maikos एक सेट स्थानमा केही उत्सव समयमा परम्परागत नृत्य प्रदर्शन। सबै भन्दा ठूलो ‘पुरानो राजधानी को नृत्य’ मा अनुवाद जो Miyako Odori छ। यो Kaburenjo थिएटर मा गरिन्छ, र यो तपाईं उपस्थित गर्न चाहनुहुन्छ भने छिटो सिट बुक गर्न महत्त्वपूर्ण छ त यो एकदम लोकप्रिय छ 1873. देखि चेरी फूल सिजन लागि हरेक अप्रिल प्रदर्शन गरिएको छ। त्यहाँ नोभेम्बर बेला Gion Odori भनिन्छ सानो नृत्य छ। हुनत Kaburenjo थिएटर मा कम प्रदर्शन हो यो, शरद ऋतु लागि परिवर्तन पातहरु मना छ।
अब तपाईं क्योटो गरेको Geiko जिल्ला र जापानी संस्कृति आफ्नो योगदान मा सबै जानकारी छ। तपाईं जापान तपाईंको अर्को यात्रा मा एक वास्तविक geiko पूरा गर्न सक्छन् कसरी थप जानकारीको लागि बाहिर Maikoya केन्द्र वेबसाइट जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्!
MaikoGeishaGeikoMaikoyaजापानी संस्कृतिचाय हाउसMaiko कैफेMaiko भान्सा